siifsiin – Page 32 – Oromo Literature and Culture
Tuulamni Ijoollee sadii qaba. Isaanis Daaccii, Bachoo fi Jillee dha. Yeroo mara namooti hedduun gaafa maqaa Sooddoo jedhu dhagayan akka qomoo Guraageetti kan ilaalan hedduu dha. Sooddoon ijoollee sadii godhatee lafasaa maqaasaatiin moggaafatee irra jiraachaa ture. Sadan ijoollee sooddoo; Odituu, Ummee(Tum’e) fi Liiban jedhamu. Isaan kunniinidha kan har’a sadan sooddoo jedhamanii beekaman. Lafti Sooddoo naannoo … Continue reading Sadan Sooddoo
Oromoon manni yoo gubate manni gubate hin jedhanni gabbate jedha malee. Oromoon dubartii takka yoo ulfoofte dubartiin ulfoofte hin jedhu garaatti hafe jedha malee. Nama dubartii nama biraa gudeede irratti qabame tokko gudeede hin jedhan hammate jedhan malee. Jaarsa dogoggoreen doggorte hin jennu hin mucucattan jennaa. Daa’immni takka yoo dute, duute hi jedhamu ni deebite … Continue reading Jechoota Safuu
Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni omiishakee ormaafuu gaaddisaa Kan … Continue reading Oromiyaa
Hayyooti fayyaa daa’imaanii akka jedhanitti, daa’imni dhalatanii hanga ji’a ja’aatti harma haadhaa malee nyaati gara biraa akka isaan hin barbaachisne gorsu. Kun dhugaa saayinsii fayyaadhaan mirkanaa’edha:- Harmi haadhaa wanta guddinaa fi jabina daa’imaaf barbaachisu mara of keessa qaba. Nyaanni gara biraa daa’imaaf gaarii ta’e hin jiru.Harma hoosisuun kan caalu hin jiru. Harma hoosisuun daa’imman irraa … Continue reading Harma Haadhaa